जापानी युवाहरुले किन छाडे सेक्स, सेक्सप्रतिको घट्दो रुची चिन्ताजनक | Sambad Media
जापानी युवाहरुले किन छाडे सेक्स, सेक्सप्रतिको घट्दो रुची चिन्ताजनक
जापानी युवाहरु सेक्स गरिरहेका छैनन् । एक अध्ययनका अनुसार यस्ता व्यक्तिको संख्या लगातार बढिरहेको छ कि जसले कहिल्यै सेक्स गरेका छैनन् र अहिले गरिरहेका छैनन् ।
जापानमा सेक्सप्रति घट्दो रुची के चिन्ताजनक छ ? बीबीसी टोक्यो सम्वाददाता रुपर्ट विंगफिल्ड होयसले यसको जाँच गरेका छन् ।
जापानको पहिचान लामो समयदेखि सेक्सका विषयमा कयौ पटक चर्चामा रहेको छ । यो देशमा ‘लभ होटल’का लागि पनि जानिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले जापानलाई के भयो कि युवाहरुको रुची सेक्सबाट अन्त्य भयो ।
२६ वर्षका एनो मात्सुई कमेडियन हुन् । उनले भने–मसँग आत्मविश्वास छैन । म युवतीहरु माझ पनि कहिल्यै लोकप्रिय रहिनँ । एकपटक मैले एक जना युवतीसँग भनेँ तर उनले अस्वीकार गरिन् । यो मेरा लागि प्रताड्नाभन्दा कम थिएन।
जापानमा १८ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ४३ प्रतिशत मानिसले कहिल्यै सम्भोग गरेका छैनन् । ५२ प्रतिशतका अनुसार उनीहरु अहिले पनि भर्जिन छन् र ६४ प्रतिशतले अहिलेसम्म रिलेशनसीपमा छैनन् ।
मात्सुईले भने–मजस्तै कयौ यस्ता पुरुष छन् जसलाई डराएका महिला फेला पारे । हामीहरु अस्वीकार हुने डरबाट ग्रसित छौ । यस्तो अवस्थामा हामी खाली समय आफ्नो शौक पुरा गरेर बिताउँछौ । यसमा एनिमेशन सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ।
उनले भने–म स्वयम घृणा गर्दछु तर यसमा केही पनि गर्न असमर्थ छु ।
४५ वर्षकी रोकुदेनाशिको कलाकार हुन् । उनीसँग दुई युवती पनि छन् । त्यसमध्ये एक जनाले भनिन्–म अहिले जुन स्थानमा छु यो मेरा लागि सरप्राइजजस्तै हो । किनभने मेरा लागि मेरो ब्वाइफ्रेण्डसँग सेक्स निकै महत्वपूर्ण छ । स्पष्ट छ यी महिला जापानमा ट्रेन्डको हिसावले विल्कुल अलग छिन् ।
रोकुदेनाशिकोले भनिन–कसैका साथ रिलेशनसीपमा हुनु सजिलो छैन । एक जना युवा एक युवतीका साथ डेटमा जाने सुरुवात गर्नुपर्छ । म मान्दछु कि अधिकांश पुरुष यो तनाव लिन चाहँदैनन् । उनीहरु इन्टरनेटमा पोर्न हेर्न सक्छन्, त्यसैबाट उनीहरु सन्तुष्टि लिने गर्दछन् ।
युवा जापानी पुरुष त इन्टरनेटमा पोर्न हेर्छन तर महिला के गर्लान् त ? २४ वर्षीया एना अकाउन्ट एक्जिक्युटिभ हुन् । उनले भनिन्–म सेक्स गर्नुभन्दा खाना र स्लीप वाइन पिउँन रुचाउँछु । सेक्स मेरा लागि आवश्यक छैन, न त इच्छा नै छ ।
एनाले अगाडि भनिन्–जब म युनिभर्सिटीमा आएँ तब मैले आमाबाबुको रोकटोकबाट मुक्ति मिल्यो । मलाई अबेरसम्म बाहिर जाने स्वतन्त्रता मिल्यो र साथीहरुसँग ड्रिङ्क गर्न पनि सजिलो भयो । एउटा ब्वाइफ्रेण्डले मेरो स्वतन्त्रता सीमित गर्न सक्छ, म यो कदापि चाहँदिन । एजेन्सी